Special०० विशेषज्ञहरू आईफोन क्यामेराका लागि मात्र काम गर्छन् आईफोन समाचार
जस्तो कि हामीले पहिले नै धेरै पटक भनें, आईफोन क्यामेरा बजार मा राम्रो छैन। त्यहाँ अन्य क्यामेराको साथ उत्तम स्मार्टफोनहरू छन्, तर आईफोनको बारेमा राम्रो कुरा यसको बहुमुखी प्रतिभा र प्रयोगको सजिलो हो। जो कोहीले पनि औंल्याउन, गोली खिच्न र लगभग कुनै पनि सेटि inमा राम्रो फोटो लिन सक्दछन् र यो एक कारण यो हो किन यो सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको क्यामेरा हो, एक बर्ष, फ्लिकरमा। तर किन यो यति राम्रो छ? हुनसक्छ यो त्यहाँ छ किनकि 800०० ईन्जिनियर र अन्य विशेषज्ञहरूको टोली तिनीहरू केवल आईफोन क्यामेरामा समर्पित छन्।
यस टोलीका प्रभारी चार्ली रोजले सीबीएस न्यूजलाई एक साक्षात्कारमा उनीहरूलाई देखाउनु अघि भनेको थियो। माइक्रो-सस्पेंशन प्रणाली जब हात सारियो क्यामेरा लाई ठीक गर्दछ। गुलाबले वर्णन गरे अनुसार यस प्रणालीलाई चार -० माइक्रोन तारमा निलम्बन गरिएको छ, मानव कपालभन्दा राम्रो छ, जसले सबै निलम्बन र X र Y आन्दोलनलाई समर्थन गर्दछ।
प्रयोगशालामा, ईन्जिनियरहरूले कुनै पनि प्रकारको प्रकाशको लागि क्यामेरा क्यालिब्रेट गर्छन्। रोज अनुसार, कब्जा गर्न एक छवि २,24.000,००० मिलियन अपरेशन्स गरियो। र सबै भन्दा राम्रो फोटोग्राफी नियन्त्रण नगर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो हो कि यी सबै अपरेशनहरू स्वचालित रूपमा प्रदर्शन गरिन्छ जब हामी आईफोन क्यामेरा प्रयोग गर्छौं, हामी यसलाई स्वत: मोडमा छोड्दछौं।
हुन सक्छ यो हुन सक्छ, म विश्वास गर्दछ कि आईफोन क्यामेरा एक पेन्डिंग मुद्दा छ। जब हामी घरभित्र प्रकाशको साथ छन् तर धेरै उज्यालो हुँदैनन्, स्वत: मोडले बुझ्दछ कि फ्ल्यास प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन, त्यसैले यसले अक्सर खराब प्रकाशको साथ फोटो खिच्दछ, वास्तविक र colorsहरू सहित, तर गरीब। यी सर्तहरूमा म फ्ल्यास सक्रिय गर्न मन पराउँछु, त्यसैले म पहिले देखि नै स्वचालित मोड खेल्दैछु र फोटोहरू सधैं उत्तम हुँदैन। ती अवस्थाहरूमा, सम्भव भएमा, यो आफैंले फ्ल्यास प्रयोग गर्ने आइकन देखा पर्छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि अलिकता घुम्नु उत्तम हुन्छ, जसले शटको अन्तिम परिणामलाई सुधार गर्दछ। जे भए पनि, आईफोन क्यामेरा एक हो जुन मलाई सब भन्दा राम्रो परिणाम दिन्छ र त्यसमा काम गर्ने उत्कृष्ट टोली यसको कारण हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » हामी पहिले नै जान्दछौं किन आईफोन क्यामेरा यति राम्रो छ: special०० विशेषज्ञ मात्र यसको लागि काम गर्छन्
यसको १२ Mpx र M Mpx फ्रन्ट क्यामेराको साथ पनि, आईफोनले तस्बिर लिन्छ जुन उच्च-अन्तको स्मार्टफोनहरू भन्दा मुनि छन्। उदाहरणका लागि ग्यालक्सी S12, नोट,, LG G5, र सोनी Xperia Z6। एप्पलको यो सेक्सनमा सुधार गर्न धेरै छ।
त्यो भांग राम्रो थियो ...।
बेवास्ता प्रशंसक। यदि तपाईंसँग कम्तिमा दुई टर्मिनलहरू छैनन् जुन मैले उल्लेख गरेको छु भने, तपाईं आफैंले राम्रो राय दिनु हुँदैन। मसँग S एस प्लस र नोट have छ। सबैले पनी ग्यालक्सी एस,, एस ge एज, एज प्लस र नोट of को क्यामेरा प्रयोग गरीरहेछन्। LG G6 क्यामेरा उल्लेख नगर्नु जुन सब भन्दा राम्रो हो।
तिमी गलत छौ।
यसको मूल्यको लागि, र प्रतिस्पर्धा देखेर एप्पलले ब्याट्रीहरू राख्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि यसको स्टेबिलाइजर S6 वा Z5 को देखेर त्यत्ति राम्रो छैन।
जो कोही यो जस्तो हेर्न चाहँदैनन्, ऊ फोटोग्राफीको बारेमा थोरै बुझ्दछ कि, तपाईंले भर्खर हेर्नु पर्छ कि त्यहाँ बनाम Z5 बनाम आईफोन छन्, उसले समीक्षा दिन्छ कि हामी जाँदैछौं, जुन बाटोबाट, र यो हो तर्क, कोरोना को गहना आईफोन मा माउन्ट सोनी सेन्सरबाट हो, र सामान्य सोनीले यसलाई एप्पल हाहााहालाई ट्रेमा राख्ने छैन… यो एकदम स्पष्ट छ, सही छ? वा सेन्सर पनि एप्पल द्वारा निर्मित छ?
यदि क्यामेरा अन्य मोबाइलहरू द्वारा माउन्ट गरिएको छ भने, भिन्नता सफ्टवेयर हो
Tolokoh@si.es लाई जवाफ दिनुहोस्
सडेको स्याउ भन्यो
Carl zeiss nokia n95 8mpx क्यामेराको अगाडि र पछाडि थियो, मैले याद गरेको छु
नराम्रो एप्पललाई जवाफ दिनुहोस्
यो केवल एक फोन हो जुन पेशेवर क्यामेरा होइन
एन्टी कामहरू भन्यो
आईफोन क्यामेरा राम्रो छ किनकि लेखले भनेझैं कोहीले पनि फोटो खिचे।
जो केहि अधिक अनुभवी छन्, उनीहरूले यो सीमित पाउँनेछन् जब यो प्यारामिटरहरू हेरफेर गर्न आउँदछ र कम प्रकाश अवस्थाहरूमा तिनीहरू अनियमित हुन्छन् (जहाँ यो Z5 ले पूर्ण फाइदा लिन्छ)।
एन्टी जॉबलाई जवाफ दिनुहोस्
बिक्री अनुप्रयोग स्टोर आउँछ